အလှမကျလို့ ဘဝပကျြသှားတဲ့ မငျးသမီးလေး - Barnyar Barnyar
June 2, 2022 thanzin laypyay Story 0
ရှေးရှေးတုနျးက…ဘုရငျကွီးတဈပါးမှာ ရုပစန်ဒီဆိုတဲ့မငျးသမီးလေးတဈပါးရှိတယျ။ရုပစန်ဒီလေးဟာဘုရငျ့သမီးတျောလေးဖွဈတဲ့အပွငျ ရုပျရညျကလညျးအငျမတနျ ခြောမောလှနျးလို့ နနျးတျောတဈခုလုံးမှာ သူ့ကိုမခဈြခငျတဲ့သူမရှိဘူးတဲ့…
အားလုံးကဖူးဖူးမှုတျထားတာပေါ့။ အဲဒီလောကျကံကောငျးပွီးခြောမောနပေမေယျ့ ရုပစန်ဒီဟာလှသထကျပိုပွီးလှခငျြလို့ အခြိနျရှိသရှအေ့လှပဲပွငျနတေယျ။ စာပပေညာလညျးသိပျမသငျ မိနျးကလေးတှတေပျအပျတဲ့ပညာရပျတှကေိုလညျး မလလေ့ာဘဲလှဖို့တဈခုတညျးပဲ စဉျးစားနတေယျတဲ့။ တဈနတေ့ော့သူရဲ့အထိနျးတျောက..”တောစပျနားမှာနတေဲ့ပုဏ်ဏားတဈယောကျက ခြောမောလှပလာအောငျ မနျးမှုတျတတျတယျလို့ကွားသိခဲ့ရပါတယျသခငျမလေး…”လို့လြှောကျတငျလိုကျတယျ။
ရုပစန်ဒီလညျးခကျြခငျြးပဲ…”ဒီသတငျးဟာအမှနျပဲလားဝမျးသာလိုကျတာ..”လို့ပွောပွီးပိုလှလာဖို့အတှကျ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာအကွံထုတျတော့တယျ။ အဲဒီနောကျတော့ရူပစန်ဒီလေးဟာခမညျးတျောမငျးကွီးမသိအောငျနနျးတျောထဲကနေ တိတျတဆိတျထှကျလာခဲ့ပွီး တောစပျနားက ပုဏ်ဏားကွီးရှိရာကို အရောကျသှားတော့သတဲ့။
ကံကောငျးစှာပဲပုဏ်ဏားကွီးနဲ့တဈခါတညျးတှလေို့ ရူပစန်ဒီလေးက… ”အို ပုဏ်ဏားကွီး ကြှနျမကိုလှပလာအောငျနညျးလမျးကောငျးလေးမြားရှိရငျ ပွောပွပေးပါဦး….လို့မေးလိုကျတယျ။ ဒီအခါပုဏ်ဏားကွီးက… သမီးတျောလေး..သငျဟာလှပွီးသားပဲမလိုအပျတော့ပါဘူး….လို့ပွနျပွောတယျ…. ”အိုဒီထကျပိုပွီးလှခငျြလို့ပါကူညီပါဦးပုဏ်ဏားကွီးရယျ…”လို့ရူပစန်ဒီကအတငျးတောငျးဆိုတော့တယျ။
ပုဏ်ဏားကွီးလညျး…”ကဲ ကဲပွောမရတော့လဲ ကူညီပေးရတာပေါ့…”လို့ပွောပွီးရူပစန်ဒီကို ထူးဆနျးတဲ့ပုလညျလညျဆှဲလေးတဈကုံးထုတျပေးလိုကျတယျ။ ”ဒီလညျဆှဲဟာကြှနျုပျတတျကြှမျးတဲ့ ရူပမန်တာနျတျောနဲ့မနျးမှုတျစီရငျထားတဲ့ လညျဆှဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလညျဆှဲကို ဆငျမွနျးလိုကျတာနဲ့ သငျဟာဗမ်ဗူတဈခှငျမှာ အခြောဆုံး အလှဆုံးမိနျးကလေးဖွဈသှားလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလညျဆှဲကိုပွနျ ခြှတျမိလိုကျတာနဲ့ သငျဟာအိုမငျးရငျ့ရျောသှားပွီး အကညျြးတနျ အရုပျဆိုးသှားရလိမျ့ မယျ။ ကဲသငျဘယျလိုသဘောရလဲ…”လို့ပုဏ်ဏားကွီးကရူပစန်ဒီမငျးသမီးလေးကိုပွောလိုကျတယျ။
ရူပစန်ဒီမငျးသမီးလေးဟာ အလှဆုံးဖွဈဖို့ပဲအရေးကွီးနလေို့ ကနျြတာကိုဘာမှတှေးမနတေော့ဘဲ…”ကိစ်စမရှိပါဘူး…အမွဲတမျးလှနအေောငျအမွဲတမျးဝတျထားလိုကျမှာပေါ့…”လို့အလှယျတကူပွောလိုကျတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့မငျးသမီးလေးဟာ ပုဏ်ဏားကွီးဆီကလညျဆှဲကွိုးကိုယူပွီး ဝတျဆငျလိုကျတော့တယျ။ ရူပစန်ဒီလေးလညျးဝမျးသာအားရနဲ့ နနျးတျောကိုပွနျလာခဲ့တော့တယျ။ နနျးတျောရောကျတဲ့အခါမှာရူပစန်ဒီလေးကို ခမညျးတျောဘုရငျကွီးကတှလေို့ကျတော့ အရမျးအံ့သွသှားတယျ။
”သမီးတျောရယျဒီလောကျလှလှနျးတော့ သမီးတျောအတှကျအန်တရာယျမြားလှနျးပါတယျ အစစမှာသတိထားနပေါကှယျ…”လို့ဘုရငျကွီးဆုံးမလိုကျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရူပစန်ဒီလေးဟာမသိဟနျပွုပွီး ဘုရငျကွီးရှကေ့ထှကျခဲ့တယျ။ သူ့ရဲ့စိတျထဲမှာတော့ သူ့အလှအတှကျ အရမျးဝမျးသာနတောပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ရူပစန်ဒီလေးဟာအတိုငျးတိုငျးအပွညျပွညျရဲ့ ဘယျမငျးသမီးကမှမယှဉျနိုငျအောငျ ခြောမောလှလှနျးနတေော့တာပေါ့။
တဈနမှေ့ာတော့ရူပစန်ဒီလေးက… အငျးနနျးတျောထဲကရကေနျတျောမှာပဲ အမွဲခြိုးနရေတာ ငါ့စိတျထဲမသနျ့ရှငျးဘူး နနျးမွို့တောငျဘကျက ကွညျလငျအေးမွပွီး တသှငျသှငျစီးဆငျးနတေဲ့ ကြောကျစကျရေ စမျးခြောငျးလေးမှာသာ ရသှေားခြိုးလိုကျရရငျ ငါ့ရဲ့အသားအရညျ တှဟောဒီထကျပိုပွီး စိုပွလှေပလာမှာပဲ…လို့စဉျးစားမိတယျ။ ဒါကွောငျ့မယျတျောဆီမှာသှားရောကျပွိး ခှငျ့တောငျးကွညျ့တယျ။
ဒါပမေယျ့မယျတျောက… မွို့ပွငျမှာသားရဲတိရိစ်ဆာနျတှကေ ပေါမြားလှပါဘိနဲ့ မယျတျောခှငျ့မပွုနိုငျဘူး သမီးတျော… လို့ပွနျပွောလိုကျတယျ… မယျတျောမိဖုရားခှငျ့မပွုတော့ ရူပစန်ဒီလေးဟာသိပျစိတျညဈသှားတယျ။ ဘယျအထိနျးတျောတှကေမှလညျး မိဖုရားကွီးရဲ့အမိနျ့ကို လှနျဆနျပွီး မပို့ရဲကွရှာဘူးပေါ့။ဒီတော့ရူပစန်ဒီလေးလညျးသူ့ဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျး ဘယျသူမှမသိအောငျတိတျတိတျလေးထှကျလာခဲ့တယျ။ စမျးခြောငျးလေးနားရောကျတော့ သူ့သဘောကတြသှငျသှငျစီးနတေဲ့ စမျးခြောငျးရထေဲဆငျးပွီး ရခြေိုးတော့တာပေါ့။
ရူပစန်ဒီလေးဟာဒီလိုနဲ့စမျးခြောငျးထဲမှာရခြေိုးနရေငျး ကြောကျတုံးတဈတုံးကိုခြျောနငျးမိပွိး ရထေဲကိုလဲကသြှားတော့တယျ။ စမျးခြောငျးလေးဟာသိပျမနကျပမေယျ့ ရစေီးနတေော့ ရူပစန်ဒီလေးဟာ ရစေီးထဲမှာ မြောပါမလိုဖွဈသှားတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာ သူ့လညျပငျးကပုလဲလညျဆှဲလေးဟာ ရထေဲကို ပွုတျကသြှားသတဲ့။ ကံဆိုးခငျြတော့အဲဒီအခြိနျမှာ သူ့အနားကိုကူးလာတဲ့ငါးကွီးတဈကောငျကမွငျပွိး အစာမှတျလို့ထိုးဟပျသှားတယျ။ ခကျြခငျြးပဲရူပစန်ဒီလေးလညျး ခြောမောလှပနရောကနေ အကညျြးတနျတဲ့ အဖှားအိုကွီးပုံဖွဈသှားတော့တယျ။ ဒါကွောငျ့ ငါးကွီးရဲ့နောကျကို ခကျြခငျြးရကေူးပွီး အမီလိုကျပမေယျ့ ငါးကွီးကိုမတှရေ့တော့ဘူး။
ဒါပမေယျ့ဇှဲမလြော့ဘဲ စမျးခြောငျးလေးစီးဆငျးရာလမျးတဈလြောကျ လိုကျရှာနမေိတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပုလဲလညျဆှဲကို ထိုးဟပျသှားတဲ့ငါးကွီးကို တံငါသညျတဈဦးကဖမျးမိသှားတယျ။ တံငါသညျလညျး အိမျရောကျလို့ ငါးရဲ့ဗိုကျကိုခှဲမိတော့ အထဲကနပေုလဲလညျဆှဲက ထှကျကလြာတာပေါ့။ ဒါနဲ့ တံငါသညျလညျး လညျဆှဲကိုကိုငျပွီး တအံ့တသွနဲ့ ငေးကွညျ့နတေုနျး တံငါသညျရဲ့နောကျနားတဈပငျပျေါက ဗြိုငျးတဈကောငျဆငျးလာပွီး ပုလဲကုံးကိုသုတျခြီပြံပွေးသှားတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာစမျးခြောငျးတဈလြောကျလိုကျရှာနတေဲ့ ရူပစန်ဒီတဖွဈလဲအကညျြးတနျအဖှားအိုဟာ တံငါသညျရှိရာကို ရောကျလာသတဲ့။ အမောငျလုလငျ ကြှနျုပျရဲ့ပုလဲလညျဆှဲငါးကွီးစားမြိုသှားလို့ တှမေိ့ပါသလား..လို့တံငါသညျ ကိုမေးမွနျးလိုကျတယျ။ တံငါသညျလညျး.. အခုလေးတငျပဲအဲဒီလညျဆှဲကို ဗြိုငျးတဈကောငျ သုတျခြီပွီး အနောကျဘကျအရပျကို ပြံပွေးသှားပါတယျ… လို့အမှနျအတိုငျးပွောပွလိုကျတယျ။
ဒါနဲ့အမအေိုလညျးအခြိနျမဆိုငျးတော့ဘဲ အနောကျဘကျအရပျကို ခကျြခငျြးလိုကျသှားတော့တယျ။ လမျးမှာတှသေ့မြှလူတှကေို မေးမွနျးကွညျ့ပမေယျ့ ဘယျသူမှ မသိကွ ဘူးတဲ့။ တဈခြို့လူတှကေ ဆိုရငျ…. ဟာအဖှားကွိး တယျရှုပျပါလားသှားစမျးပါဗြာ…လို့တောငျ အျောငေါကျမောငျးထုတျလိုကျကွတယျ။
ဒါနဲ့သူမဟာစိတျညဈပွိးထှကျလာတုနျး တဈနရောအရောကျ သဈပငျပျေါမှာ ပွိုးပွိုးပကျြပကျြလကျနတေဲ့အရာတဈခုကိုတှမေိ့တယျ။ သခြောမော့ကွညျ့တော့မှဗြိုငျးတဈကောငျရဲ့လညျပငျးမှာ သူမရဲ့ပုလဲလညျဆှဲစှပျလကျြသား ဆှဲမိနတောကိုတှရေ့တယျ။ အဲဒီဗြိုငျးဟာကိုယျရောငျကိုယျဝါတှေ တောကျပနတောပေါ့။ သူမလညျးလညျဆှဲပွနျလိုခငျြလို့ ဗြိုငျးကိုအောကျကနေ အျောဟဈခွောကျလှနျ့လိုကျတယျ။
ဗြိုငျးလညျးလနျ့ပွီးထပြံပွေးသှားတော့ သူမဟာဗြိုငျးပြံပွေးတဲ့နောကျကို အမီလိုကျတော့တာပေါ့။ ဗြိုငျးဟာမိုးပျေါကနေ ပြံသှားရငျး သင်ျခြိုငျးတဈခုမှာမီးသဂွိုလျနတေဲ့ မီးပုံပျေါက ဖွတျပြံမိတယျ။ ဒီတော့မီးအပူဟပျပွီး ဗြိုငျးဟာ မီးပုံထဲပွုတျကသြှားတော့သတဲ့။ အဲဒီနောကျတော့ဗြိုငျးလညျး မီးလောငျသသှေားပွီး ဗြိုငျးငှကျနဲ့အတူ ပုလဲလညျဆှဲလေးလညျး ပွာမှုနျ့ဖွဈ သှားတယျ။
ဒီအကွောငျးတှကေို နောကျကပွေးလိုကျလာတဲ့ အကညျြးတနျအဖှားအို ရူပစန်ဒီ တှသှေ့ားပွီး ပွာပုံထဲမှာသူ့ရဲ့လညျဆှဲကို တှလေို့တှငွေ့ား လိုကျရှာမိသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွာတှကေလှဲလို့ ဘာမှရှာမတှေ့ အဖှားအိုလညျး မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့သှားရတော့တာပေါ့… ငါတော့ဒုက်ခရောကျပွီ ပုလဲလညျဆှဲလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ငါဟာအခုလိုအကညျြးတနျအဖှားအိုအဖွဈနဲ့ တဈသကျလုံးနသှေားရတော့မှာပါလား… လို့တှေးမိပွီး ပွာပုံအနီးအနားမှာပဲနပွေီး ပွာမှုနျ့ကနေ သဈပငျပေါကျလာမယျ့အခြိနျကို ထိုငျစောငျ့မြှျောနရှောသတဲ့…
အငျး…ပုလဲလညျဆှဲပွာမှုနျ့တှကေအပငျပေါကျလာပွီး အသီးသီးလာရငျ အဲဒီအသီးတှကေို လညျဆှဲလုပျပွီး ဝတျရမယျ။ ဒီတော့မှငါဟာအရငျလိုခြောမောလှပတဲ့ ရုပျအဆငျးကို ပွနျရနိုငျမယျ လို့တဈယောကျတညျး စိတျကူးယဉျပွီးတှေးတောနသေတဲ့။ နှမေိုးဆောငျး ရာသီတှပွေောငျးတဲ့တိုငျး အဲဒီသဈပငျပေါကျလာမလားဆိုပွီးတော့ အမွဲတမျးရှာဖှနေသေတဲ့။
သူ့ကိုတှကွေ့တဲ့ လူတှအေားလုံးကလညျး သူ့ကိုရူပစန်ဒီမငျးသမီးလေးမှနျး ဘယျသူမှမသိကွဘူးပေါ့။ သူ့ကိုကွညျ့ပွီး … ဒီအဖှားကွီးဟာ ဒီသူဿနျတဈဝိုကျမှာပဲ ရဈသီရဈသီလာလုပျနတေယျ။ ဘယျကမှနျးလညျးမသိပါဘူးကှာလို့ လူတဈဦးကပွောတော့ အိုအရူးမကွီး နမှောပေါ့…လို့တခွားတဈဦးကညျးဖွလေိုကျတယျ။
ဒီလိုနဲ့နောကျဆုံးတော့ ပိုမို အကညျြးတနျလာတဲ့အဖှားအိုဟာ သူ့ရဲ့ရုပျရညျကိုရအေိုငျတဈအိုငျမှာ ပွနျမွငျမိပွီး ထိတျလနျ့သဆေုံးသှားတော့တယျတဲ့။ သူမဟာသဆေုံးသှားပွီးတဲ့နောကျ ငှကျတဈကောငျဖွဈသှားတော့တယျတဲ့။ အဲဒီငှကျဟာအလှနျအရုပျဆိုးအကညျြးတနျပွီး တောစပျသင်ျခြိုငျးကုနျးတှနေားမှာ အမွဲရဈသီရဈသီနတေတျတဲ့ ဠငျးတငှကျပေါ့ကှယျ။ လှခငျြလှနျးပွီး မစဉျးစားမဆငျခွငျတတျရငျ အဲဒီလိုပဲဖွဈတတျလို့ ဒီပုံပွငျလေးကိုဖတျပွီး သငျခနျးစာယူကွပေါ့ကှယျ….။credit
အလှမက်လို့ ဘ၀ပျက်သွားတဲ့ မင်းသမီးလေး
ရှေးရှေးတုန်းက…ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးမှာ ရုပစန္ဒီဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိတယ်။ရုပစန္ဒီလေးဟာဘုရင့်သမီးတော်လေးဖြစ်တဲ့အပြင် ရုပ်ရည်ကလည်းအင်မတန် ချောမောလွန်းလို့ နန်းတော်တစ်ခုလုံးမှာ သူ့ကိုမချစ်ခင်တဲ့သူမရှိဘူးတဲ့…
အားလုံးကဖူးဖူးမှုတ်ထားတာပေါ့။ အဲဒီလောက်ကံကောင်းပြီးချောမောနေပေမယ့် ရုပစန္ဒီဟာလှသထက်ပိုပြီးလှချင်လို့ အချိန်ရှိသရွေ့အလှပဲပြင်နေတယ်။ စာပေပညာလည်းသိပ်မသင် မိန်းကလေးတွေတပ်အပ်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုလည်း မလေ့လာဘဲလှဖို့တစ်ခုတည်းပဲ စဉ်းစားနေတယ်တဲ့။ တစ်နေ့တော့သူရဲ့အထိန်းတော်က..”တောစပ်နားမှာနေတဲ့ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်က ချောမောလှပလာအောင် မန်းမှုတ်တတ်တယ်လို့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်သခင်မလေး…”လို့လျှောက်တင်လိုက်တယ်။
ရုပစန္ဒီလည်းချက်ချင်းပဲ…”ဒီသတင်းဟာအမှန်ပဲလားဝမ်းသာလိုက်တာ..”လို့ပြောပြီးပိုလှလာဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအကြံထုတ်တော့တယ်။ အဲဒီနောက်တော့ရူပစန္ဒီလေးဟာခမည်းတော်မင်းကြီးမသိအောင်နန်းတော်ထဲကနေ တိတ်တဆိတ်ထွက်လာခဲ့ပြီး တောစပ်နားက ပုဏ္ဏားကြီးရှိရာကို အရောက်သွားတော့သတဲ့။
ကံကောင်းစွာပဲပုဏ္ဏားကြီးနဲ့တစ်ခါတည်းတွေ့လို့ ရူပစန္ဒီလေးက… ”အို ပုဏ္ဏားကြီး ကျွန်မကိုလှပလာအောင်နည်းလမ်းကောင်းလေးများရှိရင် ပြောပြပေးပါဦး….လို့မေးလိုက်တယ်။ ဒီအခါပုဏ္ဏားကြီးက… သမီးတော်လေး..သင်ဟာလှပြီးသားပဲမလိုအပ်တော့ပါဘူး….လို့ပြန်ပြောတယ်…. ”အိုဒီထက်ပိုပြီးလှချင်လို့ပါကူညီပါဦးပုဏ္ဏားကြီးရယ်…”လို့ရူပစန္ဒီကအတင်းတောင်းဆိုတော့တယ်။
ပုဏ္ဏားကြီးလည်း…”ကဲ ကဲပြောမရတော့လဲ ကူညီပေးရတာပေါ့…”လို့ပြောပြီးရူပစန္ဒီကို ထူးဆန်းတဲ့ပုလည်လည်ဆွဲလေးတစ်ကုံးထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ”ဒီလည်ဆွဲဟာကျွန်ုပ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ရူပမန္တာန်တော်နဲ့မန်းမှုတ်စီရင်ထားတဲ့ လည်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလည်ဆွဲကို ဆင်မြန်းလိုက်တာနဲ့ သင်ဟာဗမ္ဗူတစ်ခွင်မှာ အချောဆုံး အလှဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလည်ဆွဲကိုပြန် ချွတ်မိလိုက်တာနဲ့ သင်ဟာအိုမင်းရင့်ရော်သွားပြီး အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးသွားရလိမ့် မယ်။ ကဲသင်ဘယ်လိုသဘောရလဲ…”လို့ပုဏ္ဏားကြီးကရူပစန္ဒီမင်းသမီးလေးကိုပြောလိုက်တယ်။
ရူပစန္ဒီမင်းသမီးလေးဟာ အလှဆုံးဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးနေလို့ ကျန်တာကိုဘာမှတွေးမနေတော့ဘဲ…”ကိစ္စမရှိပါဘူး…အမြဲတမ်းလှနေအောင်အမြဲတမ်းဝတ်ထားလိုက်မှာပေါ့…”လို့အလွယ်တကူပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းသမီးလေးဟာ ပုဏ္ဏားကြီးဆီကလည်ဆွဲကြိုးကိုယူပြီး ဝတ်ဆင်လိုက်တော့တယ်။ ရူပစန္ဒီလေးလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ နန်းတော်ကိုပြန်လာခဲ့တော့တယ်။ နန်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာရူပစန္ဒီလေးကို ခမည်းတော်ဘုရင်ကြီးကတွေ့လိုက်တော့ အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။
”သမီးတော်ရယ်ဒီလောက်လှလွန်းတော့ သမီးတော်အတွက်အန္တရာယ်များလွန်းပါတယ် အစစမှာသတိထားနေပါကွယ်…”လို့ဘုရင်ကြီးဆုံးမလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရူပစန္ဒီလေးဟာမသိဟန်ပြုပြီး ဘုရင်ကြီးရှေ့ကထွက်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့အလှအတွက် အရမ်းဝမ်းသာနေတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ရူပစန္ဒီလေးဟာအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ရဲ့ ဘယ်မင်းသမီးကမှမယှဉ်နိုင်အောင် ချောမောလှလွန်းနေတော့တာပေါ့။
တစ်နေ့မှာတော့ရူပစန္ဒီလေးက… အင်းနန်းတော်ထဲကရေကန်တော်မှာပဲ အမြဲချိုးနေရတာ ငါ့စိတ်ထဲမသန့်ရှင်းဘူး နန်းမြို့တောင်ဘက်က ကြည်လင်အေးမြပြီး တသွင်သွင်စီးဆင်းနေတဲ့ ကျောက်စက်ရေ စမ်းချောင်းလေးမှာသာ ရေသွားချိုးလိုက်ရရင် ငါ့ရဲ့အသားအရည် တွေဟာဒီထက်ပိုပြီး စိုပြေလှပလာမှာပဲ…လို့စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါကြောင့်မယ်တော်ဆီမှာသွားရောက်ပြိး ခွင့်တောင်းကြည့်တယ်။
ဒါပေမယ့်မယ်တော်က… မြို့ပြင်မှာသားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေက ပေါများလှပါဘိနဲ့ မယ်တော်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး သမီးတော်… လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်… မယ်တော်မိဖုရားခွင့်မပြုတော့ ရူပစန္ဒီလေးဟာသိပ်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ ဘယ်အထိန်းတော်တွေကမှလည်း မိဖုရားကြီးရဲ့အမိန့်ကို လွန်ဆန်ပြီး မပို့ရဲကြရှာဘူးပေါ့။ဒီတော့ရူပစန္ဒီလေးလည်းသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်လေးထွက်လာခဲ့တယ်။ စမ်းချောင်းလေးနားရောက်တော့ သူ့သဘောကျတသွင်သွင်စီးနေတဲ့ စမ်းချောင်းရေထဲဆင်းပြီး ရေချိုးတော့တာပေါ့။
ရူပစန္ဒီလေးဟာဒီလိုနဲ့စမ်းချောင်းထဲမှာရေချိုးနေရင်း ကျောက်တုံးတစ်တုံးကိုချော်နင်းမိပြိး ရေထဲကိုလဲကျသွားတော့တယ်။ စမ်းချောင်းလေးဟာသိပ်မနက်ပေမယ့် ရေစီးနေတော့ ရူပစန္ဒီလေးဟာ ရေစီးထဲမှာ မျောပါမလိုဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သူ့လည်ပင်းကပုလဲလည်ဆွဲလေးဟာ ရေထဲကို ပြုတ်ကျသွားသတဲ့။ ကံဆိုးချင်တော့အဲဒီအချိန်မှာ သူ့အနားကိုကူးလာတဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်ကမြင်ပြိး အစာမှတ်လို့ထိုးဟပ်သွားတယ်။ ချက်ချင်းပဲရူပစန္ဒီလေးလည်း ချောမောလှပနေရာကနေ အကျည်းတန်တဲ့ အဖွားအိုကြီးပုံဖြစ်သွားတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ငါးကြီးရဲ့နောက်ကို ချက်ချင်းရေကူးပြီး အမီလိုက်ပေမယ့် ငါးကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။
ဒါပေမယ့်ဇွဲမလျော့ဘဲ စမ်းချောင်းလေးစီးဆင်းရာလမ်းတစ်လျောက် လိုက်ရှာနေမိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပုလဲလည်ဆွဲကို ထိုးဟပ်သွားတဲ့ငါးကြီးကို တံငါသည်တစ်ဦးကဖမ်းမိသွားတယ်။ တံငါသည်လည်း အိမ်ရောက်လို့ ငါးရဲ့ဗိုက်ကိုခွဲမိတော့ အထဲကနေပုလဲလည်ဆွဲက ထွက်ကျလာတာပေါ့။ ဒါနဲ့ တံငါသည်လည်း လည်ဆွဲကိုကိုင်ပြီး တအံ့တသြနဲ့ ငေးကြည့်နေတုန်း တံငါသည်ရဲ့နောက်နားတစ်ပင်ပေါ်က ဗျိုင်းတစ်ကောင်ဆင်းလာပြီး ပုလဲကုံးကိုသုတ်ချီပျံပြေးသွားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာစမ်းချောင်းတစ်လျောက်လိုက်ရှာနေတဲ့ ရူပစန္ဒီတဖြစ်လဲအကျည်းတန်အဖွားအိုဟာ တံငါသည်ရှိရာကို ရောက်လာသတဲ့။ အမောင်လုလင် ကျွန်ုပ်ရဲ့ပုလဲလည်ဆွဲငါးကြီးစားမျိုသွားလို့ တွေ့မိပါသလား..လို့တံငါသည် ကိုမေးမြန်းလိုက်တယ်။ တံငါသည်လည်း.. အခုလေးတင်ပဲအဲဒီလည်ဆွဲကို ဗျိုင်းတစ်ကောင် သုတ်ချီပြီး အနောက်ဘက်အရပ်ကို ပျံပြေးသွားပါတယ်… လို့အမှန်အတိုင်းပြောပြလိုက်တယ်။
ဒါနဲ့အမေအိုလည်းအချိန်မဆိုင်းတော့ဘဲ အနောက်ဘက်အရပ်ကို ချက်ချင်းလိုက်သွားတော့တယ်။ လမ်းမှာတွေ့သမျှလူတွေကို မေးမြန်းကြည့်ပေမယ့် ဘယ်သူမှ မသိကြ ဘူးတဲ့။ တစ်ချို့လူတွေက ဆိုရင်…. ဟာအဖွားကြိး တယ်ရှုပ်ပါလားသွားစမ်းပါဗျာ…လို့တောင် အော်ငေါက်မောင်းထုတ်လိုက်ကြတယ်။
ဒါနဲ့သူမဟာစိတ်ညစ်ပြိးထွက်လာတုန်း တစ်နေရာအရောက် သစ်ပင်ပေါ်မှာ ပြိုးပြိုးပျက်ပျက်လက်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့မိတယ်။ သေချာမော့ကြည့်တော့မှဗျိုင်းတစ်ကောင်ရဲ့လည်ပင်းမှာ သူမရဲ့ပုလဲလည်ဆွဲစွပ်လျက်သား ဆွဲမိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ အဲဒီဗျိုင်းဟာကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေ တောက်ပနေတာပေါ့။ သူမလည်းလည်ဆွဲပြန်လိုချင်လို့ ဗျိုင်းကိုအောက်ကနေ အော်ဟစ်ခြောက်လှန့်လိုက်တယ်။
ဗျိုင်းလည်းလန့်ပြီးထပျံပြေးသွားတော့ သူမဟာဗျိုင်းပျံပြေးတဲ့နောက်ကို အမီလိုက်တော့တာပေါ့။ ဗျိုင်းဟာမိုးပေါ်ကနေ ပျံသွားရင်း သင်္ချိုင်းတစ်ခုမှာမီးသဂြိုလ်နေတဲ့ မီးပုံပေါ်က ဖြတ်ပျံမိတယ်။ ဒီတော့မီးအပူဟပ်ပြီး ဗျိုင်းဟာ မီးပုံထဲပြုတ်ကျသွားတော့သတဲ့။ အဲဒီနောက်တော့ဗျိုင်းလည်း မီးလောင်သေသွားပြီး ဗျိုင်းငှက်နဲ့အတူ ပုလဲလည်ဆွဲလေးလည်း ပြာမှုန့်ဖြစ် သွားတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေကို နောက်ကပြေးလိုက်လာတဲ့ အကျည်းတန်အဖွားအို ရူပစန္ဒီ တွေ့သွားပြီး ပြာပုံထဲမှာသူ့ရဲ့လည်ဆွဲကို တွေ့လို့တွေ့ငြား လိုက်ရှာမိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြာတွေကလွဲလို့ ဘာမှရှာမတွေ့ အဖွားအိုလည်း မျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားရတော့တာပေါ့… ငါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီ ပုလဲလည်ဆွဲလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ငါဟာအခုလိုအကျည်းတန်အဖွားအိုအဖြစ်နဲ့ တစ်သက်လုံးနေသွားရတော့မှာပါလား… လို့တွေးမိပြီး ပြာပုံအနီးအနားမှာပဲနေပြီး ပြာမှုန့်ကနေ သစ်ပင်ပေါက်လာမယ့်အချိန်ကို ထိုင်စောင့်မျှော်နေရှာသတဲ့…
အင်း…ပုလဲလည်ဆွဲပြာမှုန့်တွေကအပင်ပေါက်လာပြီး အသီးသီးလာရင် အဲဒီအသီးတွေကို လည်ဆွဲလုပ်ပြီး ဝတ်ရမယ်။ ဒီတော့မှငါဟာအရင်လိုချောမောလှပတဲ့ ရုပ်အဆင်းကို ပြန်ရနိုင်မယ် လို့တစ်ယောက်တည်း စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတွေးတောနေသတဲ့။ နွေမိုးဆောင်း ရာသီတွေပြောင်းတဲ့တိုင်း အဲဒီသစ်ပင်ပေါက်လာမလားဆိုပြီးတော့ အမြဲတမ်းရှာဖွေနေသတဲ့။
သူ့ကိုတွေ့ကြတဲ့ လူတွေအားလုံးကလည်း သူ့ကိုရူပစန္ဒီမင်းသမီးလေးမှန်း ဘယ်သူမှမသိကြဘူးပေါ့။ သူ့ကိုကြည့်ပြီး … ဒီအဖွားကြီးဟာ ဒီသူဿန်တစ်ဝိုက်မှာပဲ ရစ်သီရစ်သီလာလုပ်နေတယ်။ ဘယ်ကမှန်းလည်းမသိပါဘူးကွာလို့ လူတစ်ဦးကပြောတော့ အိုအရူးမကြီး နေမှာပေါ့…လို့တခြားတစ်ဦးကည်းဖြေလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့ ပိုမို အကျည်းတန်လာတဲ့အဖွားအိုဟာ သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုရေအိုင်တစ်အိုင်မှာ ပြန်မြင်မိပြီး ထိတ်လန့်သေဆုံးသွားတော့တယ်တဲ့။ သူမဟာသေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် ငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားတော့တယ်တဲ့။ အဲဒီငှက်ဟာအလွန်အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ပြီး တောစပ်သင်္ချိုင်းကုန်းတွေနားမှာ အမြဲရစ်သီရစ်သီနေတတ်တဲ့ ဠင်းတငှက်ပေါ့ကွယ်။ လှချင်လွန်းပြီး မစဉ်းစားမဆင်ခြင်တတ်ရင် အဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်လို့ ဒီပုံပြင်လေးကိုဖတ်ပြီး သင်ခန်းစာယူကြပေါ့ကွယ်….။credit
Total Hits : 333427